म्यानचेस्टर डर्बी भिडन्त : कसले मार्ला बाजी ? « Lokpath
२०७७, २२ पुष बुधबार १५:११
म्यानचेस्टर डर्बी भिडन्त : कसले मार्ला बाजी ?
प्रकाशित मिति : २०७७, २२ पुष बुधबार १५:११
काठमाडौं । काराबाओ कप (इएफएल) फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज म्यानचेस्टर युनाईटेड र म्यानचेस्टर सिटीभिड्दै छन् । ओल्ड ट्राफोर्डमा हुने म्यानचेस्टर डर्बी भिडन्त नेपाली समय अनुसार राति १:३० बजे शुरु हुनेछ ।
दुबै टिम जित निकाल्दै फाइनल पुग्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने छन् । खेलको विजेताले फाइनलमा टोटेनहमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
टोटेनहम च्याम्पियनसिप क्लब ब्रेन्टफोर्डलाई २-० ले पराजित गर्दै फाइनल पुगिसकेको छ ।
घरेलु मैदानमा सिटीविरुद्ध युनाईटेडका फरवार्ड एडिन्सन काभानीले खेल्ने छैनन् । ३ खेलको प्रतिबन्धको कारण उनी टिम बाहिर रहेका छन् । तर, सिटीका ग्राबियल जिसस र केली वाल्करले युनाईटेडविरुद्ध खेल्ने सम्भावना रहेको छ ।
उनीहरु कोरोनाको कारण सेल्फ आईसोलेसन अवधि पुरा गरेर टिममा सामेल भईसकेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप (पीएम कप) एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा
काठमाडौं । चौंथो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज (बुधवार) दुई
लेवरकुसेनसँग डर्टमण्ड स्तब्ध !
काठमाडौं । जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा बोरुसिया डर्टमण्ड पराजित भएको छ । मंगलवार राति
जितसँगै लेष्टर सिटी प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं । जितसँगै लेष्टर सिटी इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ